Ukuncibilika kweqhwa e-Arctic kudedela i-methane! | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuncibilika kweqhwa eqhweni e-Arctic kudedela i-methane!
UClaudi Casal | | Ukuguquka kwesimo sezulu
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule umbiko wesayensi owashicilelwa ku- «Scientific Reports» 7 (inombolo ye-athikili ngu-5828 ka-2017), yaveza iziphetho ezingaphezu kwezethusayo. IMethane ebhajwe eqhweni lase-Arctic kusukela ekuqobekeni kwe-permafrost iyadedelwa. Ukuze siqonde ukubaluleka kobunzima balo mcimbi, kufanele siqale sikhumbule ukuthi angamaphakethe egesi yemethane ebhajwe eqhweni okuthi uma isikhululiwe, ichithe unomphela. Ukukhishwa kwegesi yemethane kunomphumela onamandla kakhulu wokushisa izulu. Inamandla futhi ayiphindaphindeki ka-20/30 maqondana ne-carbon dioxide.
Ngokwezibalo zezifundo, igesi yemethane iyimbangela yesithathu yokwenyuka kwamazinga okushisa emhlabeni. Inkinga lapha ilele ekukhululekeni kwaleyo methane ebibhajwe yaqoqelwa ngaphansi kweqhwa, manje esededelwa. I-permafrost eqediwe, ebizwa ngokuhluka kwayo kusuka ezingqimbeni ezisanda kuvela nezineqhwa, yakhiwa ePleistocene. Umthelela okungenzeka ukuthi lokhu uzoba nawo uphezulu ngenxa yomphumela wakho wempendulo. Igesi le-methane elikhishwe linyusa ukufudumala, okwandisa ukuncibilika, okwandisa ukukhishwa kwegesi yemethane ezindaweni ezingeke ziphinde ziqandwe ... njll.
1 Ngabe isifundo senziwa kanjani?
2 Yiziphi iziphetho ezithathwa ocwaningweni?
2.1 Ukuncipha kweqhwa
2.2 Kunezindawo eziningi ngaphandle kwaleyo efundwe ngezimo ezifanayo
2.3 Umphumela wempendulo
Ngabe isifundo senziwa kanjani?
Ucwaningo, olwenziwe endaweni eyi-13.000km2 delta yaseMackenzine. Kuyinto delta yesibili arctic. Indawo okufundwe kuyo ibiyi-320km ukusuka entshonalanga kuya empumalanga nama-240km ukusuka enyakatho kuye eningizimu. Izilinganiso zithathwe zangena emkhunjini womkhumbi-mkhathi iPolar 5 ovela e-Alfred Wegener Helmholtz Institute, Centre for Polar Sciences naseMaribas. Yize lolu cwaningo lusanda kushicilelwa, isikhathi lapho isifundo sihlale khona endizeni besiphakathi kuka-2012 no-2013. Kubandakanya izinsuku ezi-5 zokuhamba ngendiza nemizila yezindiza engama-44 ngonyaka wokuqala, nezinsuku eziyi-7 zokundiza kanye nama-40 imizila ngonyaka wesibili.
Izilinganiso zomkhathi-mkhathi zenziwe ngekhanda lasekhaleni elingamamitha amathathu, kufaka ne-probe enemigodi emi-3 yokukala i-vector yomoya eyi-5D ebibekwe ngaphambili kwendiza. Umoya wesampula wadonswa endaweni yokungena engenhla kwekhabini, futhi izingqinamba zegesi yemethane zahlaziywa ku-RMT-3 ngo-200 kuphela. Ngo-2012, yahlaziywa kumhlaziyi we-Fast Greenhouse Gas analyzer FGG2013EP, kuwo womabili igesi le-methane, i-carbon dioxide nomphunga wamanzi.
Yiziphi iziphetho ezithathwa ocwaningweni?
Ucwaningo lwenziwa endaweni eyayingasasebenzi eMfengwini iMackenzie, eCanada. Ukukhishwa okunamandla kwegesi yemethane okutholwayo kukalwe kuyo yonke i-10.000km2. I-Permafrost ikhonjiswe ukuthi isebenza njengeqhwa elikhulu eligcina izinsiza zamaminerali nezinsalela.
Okokuqala, ukuncipha kweqhwa esimweni sezulu esishisayo kungahle kungagcini ngokukhipha ukukhiqizwa kwegesi ye-methane ye-biogenic. Kepha futhi ekwandiseni ukukhishwa kwegesi yemethane ye-geological, okwamanje ebhajwe ngaphansi kwephraphrost eqhubekayo futhi eqinile. Njengoba izindlela ezintsha zokukhishwa zivulekile ngenxa yokuncibilika kwe-permafrost.
I-permafrost eshisiwe e-Alaska. Isithombe sihlinzekwe yi-NASA
Kunezindawo eziningi ngaphandle kwaleyo efundwe ngezimo ezifanayo
Okwesibili, ezinye izifunda ze-Arctic ezinokugcinwa kwegesi yemvelo kanye no-oyela, okwamanje ezimbozwe yi-permafrost eqhubekayo, zingafakwa lapho kukhulunywa ngokukhishwa kwegesi yemethane yesikhathi esizayo, uma ukuncibilika unomphela kwe-permafrost kuqhubeka.
Okwesithathu, imiphumela etholwe ososayensi ikhombisa ukuthi ukukhishwa komhlaba kwegesi yemethane kungasiza kakhulu kumphumela wempendulo. I-Permafrost-Carbon-Climate (ngobuchwepheshe). Ikakhulukazi ezindaweni ezineqhwa elisengozini yokuncibilika futhi ngenxa yalokho lifanelwe ukunakwa okwengeziwe.
Umonakalo odalwa ukufudumala kwembulunga yonke uya ngokuya ubonakala kuwo wonke amazwe. Umbuzo uwukuthi ngabe kuzokwanela nje ukunciphisa ukukhishwa kwe-CO2, noma ngabe kukhona okunye okufanele kwenziwe ngakho. Umbuthano onobungozi ofakiwe, kubonakala sengathi awuzukuma kanjalo nje.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuncibilika kweqhwa eqhweni e-Arctic kudedela i-methane!
Ukuhambisana neSivumelwano SaseParis ngeke kuvimbele lo mkhuba wase-El Niño
I-India yakha amakhaya aluhlaza ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu